Roap Dapoxetine HCL pulver (129938-20-1) - Manufacturers - Phcoker
SKU: 129938-20-1 Sokajy: Sex Hormone
Roap Dapoxetine HCL poopy (129938-20-1) video
Roap Dapoxetine Dipoxetine Hydrochloride vovoka dia vetivety fampihetseham-pandehanana serotonine (SSRI) izay ampiasaina manokana amin'ny fitsaboana ejaculation vao haingana amin'ny lehilahy taona teo anelanelan'ny 18 sy 64 taona. Io fanafody io dia tsy tokony horaisin'ny lehilahy izay tsy voamarina amin'ny fikajiana aloha (PE). Ny dopoxetine Hydrochloride dia miasa amin'ny fampihenana ny mpanotrona serotonin, ny fampitomboana ny fihetsika serotonin amin'ny sifotra post synaptika, ary vokatry ny fampiroboroboana ny fihazonana ejaculatory. Amin'ny maha mpikambana iray ao amin'ny fianakaviana selotonin (SSRI), ny dopoxetin Hydrotloride dia noforonina ho toy ny mpanohitra. Na izany aza, mifanohitra amin'ny SSRI hafa, ny poofa Hydrochloride Raw dapoxetine dia miondrika ary very maina ao amin'ny vatana. Ny fananana haingam-pandeha no mahatonga azy io ho an'ny fitsaboana ny PE saingy tsy ho toy ny mpanohitra.
Roap Dapoxetine HCL poids (129938-20-1) Specifications
Product Name Dopoxetine hydrochloride poids
Anarana simika (S) -N, N-dimethyl-1-phenyl-3- (1-naphthalenyloxy) propanamine hydrochloride, S - (+) - N, N-dimethyl-a- [2- (naphthalenyloxy) ethyl] benzenemethanamine hydrochloride, LY -210448 hydrochloride
Brand Name Priligy sy Westoxetin
Drug Class Serotonin mpanelanelana mpanondrana; SSRI; selotonin reuptake inhibitor; antidepressant
molekiolan'ny Formula C21H23NO · HCl
molekiolan'ny Wvalo 341.87
mitsonika Point 180-182 ° C
Ny antsasaky ny biolojia 1.31 ora
Solubility Azo havaozina amin'ny DMSO (68 mg / ml amin'ny 25 ° C), chloroform, methanol, rano (68 mg / ml amin'ny 25 ° C) ary ethanol (68 mg / ml amin'ny 25 ° C).
Application Mpandrindra serotonin-sela voafantina
Roap Dapoxetine HCL poopy (129938-20-1) Description
Dapoxetine Hydrochloride dia fitsaboana natao manokana ho an'ny lehilahy manana olana amin'ny ejaculation aloha.
Ny dopoxetine Hydrochloride poèo dia ahitana ny dapoxetine ao amin'ny dapoxetine, izay karazana fanafody fantatra amin'ny hoe fihenan-tsakafo fikosehana amin'ny serotonina fohy.
Dapoxetine dia miasa amin'ny fampitomboana ny asan'ny serotoninina ao anatin'ny rafi-pitatitra. Ny serotonin dia mpandidy ny neurotransnemint izay handefasana hafatra eo anelanelan'ny sela nerve. Manana andraikitra samihafa ao amin'ny vatana izy ary mandray anjara amin'ny fandefasana ny hafatra nervey izay miteraka fihanaky ny ejaculation.
Ny fampitomboana ny asan'ny serotoninina ao amin'ny rafi-pitabatabana dia manampy amin'ny fampitomboana ny fotoana ilana ny ejaculate ary hanatsara ny fanaraha-maso ny ejaculation.
Roap Dapoxetine HCL poopy (129938-20-1) Mechanisman'ny Asa
Ny dapoxetine Hydrochloride amin'ny hetsika hetsika dia heverina fa mifamatotra amin'ny fampihenana ny rehekotra neuronal ny serotonina sy ny fanamafisana ny serotonin asa. Ny faritra afovoan-java-manjopiara dia manjavozavo sy lozam-bary izay mamorona tambajotra tena mifamatotra. Ny ivontoeran'ny fitsaboana sy ny parasy mampihetsi-po ary ny fitsaboana dia vokatry ny firaisana ara-pihetseham-pandrenesana sy ny fikolokoloana marefo ao amin'ny tsenan-tsofa miverina, dia miara-miasa amin'ny fikarakarana fitrandrahana ara-pahasalamana mitranga mandritra ny ejaculation. Ny porofo azo antoka dia manondro fa ny serotonine (5-HT), manerana ny ati-doha midina amin'ny lalana, dia miteraka anjara amin'ny ejaculation. Hatramin'izao, dia misy mpanapitrisa telo mpanaraka 5-HT (5-HT (1A), 5-HT (1B), ary 5-HT (2C) no napetraka mba hanelanelana ny fanodikodinan'ny 5-HT amin'ny ejaculation.
Fampiharana ny poofon'ny HCL Dapoxetine HCL (129938-20-1)
Dopoxetine Hodi-kidrohy dipoxetine dia ampiasaina mba hanaovana ejaculation aloha. Izany dia manampy amin'ny fampitomboana ny fotoana voafetra amin'ny ejaculate ary manampy amin'ny fanatanterahana tsara kokoa mandritra ny fifandraisana.
Dapoxetine HCL poids recommended (129938-20-1) Dosage
Dosage 30 mg iray na adiny telo alohan'ny hanaovana firaisana ara-nofo. Ny dapoxetine dia tokony hatao indray mandeha isan'andro. Raha ny tsy fahombiazan'ny tsy fahampian'ny fiantraikany, dia mety hampitomboina ny dosage amin'ny 60 mg.
Benefits amin'ny vovo-pototra Dopoxetine (129938-20-1)
Ny voka-dratsiny lehibe & tsy fahita firy ho an'ny vovony Hydrochloride Dapoxetine:
Fahamaotinana sy haingam-pandeha
Fahasahiranana sy fisavorovoroana
Hiantsoantso na midradradradra